Golaha Murtida iyo Madadaalada ee Hagerysa (National Theatre)oo dhismahiisii gebogabo ku dhaw yahay . | Salaan Media
Golaha Murtida iyo Madadaalada ee Hagerysa (National Theatre)oo dhismahiisii gebogabo ku dhaw yahay .
Waxaa loo baahan yahay meel ummadu kaga nasato siyaasada , qabyaalda iyo qaadka oo runtii dadkii wareer ku riday gaar ahhaan dhalinyarrda oo u baahan meel dhaqanka iyo hidaha lagu soo bandhigo.Dhismaha weyn ee tiyaatarka Haregysa iyo suuqa weyn ee laga dhisayo ayaa magaalada Hargeysa u keenay bilic weyn oo casriya , Dhismahan oo ah dhismaha ugu weyn magaalada hargeysa ayaa waxa uu noqonyaa THEATRE AND MALL kaas oo magaalada ku soo kordhin doona bilic casriya . hadaba dhismahan oo uu maal galiyey Maal Qabeenka Weyn ee Somaliland iyo Djabouti ee Cumar Caydiid ayaa la filayaa in markuu dhamaado uu magaalada kusoo kordhiyo shaqo, bilic, iyo madadaalo .waxaa gobtaas sanadanahan booqanyey Hobolo caana iyo Ciyartooy heer caalami ah sida MO FARAH .
Fanaan Maxamuud Cumar yare (walaalaha Sweden)oo markii ugu horeysay booqanayay Tiyaatarka Hargeysa in ka badan dhawr iyo labaatan sanno oo uu ku noolaa dibedaha, ayaa sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay dib u dhis lagu sameeyo xaruntan oo kor u qaadi doonto fanka Soomaalidu oo burbursanaa muddo ka badan 23 sanno.
â€œ Aad baan ugu faraxsanahay in aan imaado halkan Tiyaatarkii oo la dhisayo, meel aan ka heesno maano haysan wakhti dheer, waxa ay xarun u tahay Soomaali oo dhan, maadaama oo ay Magaalada Hargeysi tahay meeshii uu ka hanaqaaday fanka Soomaalidu, wax walba waa cajiib, hadda waa la casriyeeyay oo anigu aniga oo yar ayaan ayaan joogay Tiyaatarka â€œ ayuu yidhi Sir Maxamed Cumar oo saxaafadu kula hadlayay barxada hore ee Tiyaatarka.
Siciid Xaaji Afqalooc oo ah wakiilka ganacsade Cumar Caydiid oo ah ninka maalgashaday dhismaha Tiyaatarka ayaa sheegay in hawsha dhismuhu ay wakhtigan gabagabo ku dhawdahay, isla markaana si heersare ah loo casriyayn doono marka la dhamaystiro.
Ka Dibna waxa ay fanaanka iyo orodyahanku kormeer ku soo mareen qaybaha kala duwan ee dhismuhu uu ka socdo,iyaga oo aad ula dhacsanaa nidaamka loo nasqadeeyay Tiyaatarka oo a hore ay u fadhiisan jireen laba kun oo qof , balse hadda ay waxa wax ku daawan kara ilaa 3 kun oo ruux.